BEERTA: FAA'IIDOOYINKA IYO DHIBAATADA - DIGSIYADA
Beerka jidhka: halabuurka, faa'iidooyinka, khatarta
Haricot waa mid ka mid ah dhirta legumes ugu weyn, kaas oo loo beeray kumanaan sano. Maanta, in ka badan 20 nooc oo digir ah ayaa loo isticmaalaa karinta, faa'idooyinka mid kasta oo ka mid ah jidhka bini-aadamku waa isku mid, iyo dhadhanka iyo muuqaalka dabiiciga ah way ka duwan yihiin. Digirta waa, ugu horreyntii, borotiinka, waa qayb muhiim ah oo lagama maarmaan u ah dheef-shiid kiimikaad iyo xoojinta nidaamka muruqyada. Tani waxay sabab u tahay, digirta ayaa lagu qiimeeyaa nafaqada isboortiga iyadoo ay ku talinayaan nafaqada sida cunto saxarood. Wixii khudradda, digirta ayaa ah ilaha ugu muhiimsan ee borotiinka iyo bedelka cuntada hilibka. Qodobkan waxaan eegeynaa sida ay digirta u tahay faa'iido jidhka ah iyo sida loo isticmaali karo karinta, kiknoolajiyada, iyo sidoo kale ujeedooyinka daaweynta iyo ka hortagga.
Ma taqaanaa? Diiwaanka ugu horreeya ee beerista digirta ayaa dib u celisa qarnigii 11-aad, kadibna waxa kaliya loogu beeray ujeedo qurxinta. Waxay bilaabeen inay cunaan digirta u dhow qarnigii XVII. Queen Cleopatra ee Boqortooyada Masar waxay isticmaashaa digirta sida maaddada maskaxda. Dhexdhexaadiya Talyaaniga, budada waji ayaa laga sameeyay digirta.
Tirada iyo qiimaha nafaqada ee digirta
Faa'iidooyinka faa'iido leh ee digirta ayaa u sabab ah si gaar ah Halabuurka hodanka ah gaar u ah badeecadda asalka dhirta. Digirta waxaa ku jira fitamiinada A, B1, B2, B5, B6, B9, C, PP; sida macdanta, potassium, calcium, manganese, sodium, sulfur, zinc, fiber, oleic acid, pectins, istaarijka, monosaccharides, disaccharides, iwm. ), faa'iidooyinkuna way dhaafsadeen badeecooyinka kale ee dhirta kale. Kaloori ugu sarreeya waa noocyada digirta cad, ugu yaraan - digirta cagaaran (24 kcal total). Waxyaalaha borotiinka ee digirta ayaa gaara 8.4 g (miraha cas), baruurta - illaa 0.5 g, carbohydrates - ilaa 21.5 g
Ma taqaanaa? Dal kasta wuxuu leeyahay nooca ugu wanaagsan ee noocyada digirta, oo loo isticmaalo karinta inta badan. Tusaale ahaan, Georgia waa miro madow ama yar oo madow; ee Mexico, bajos, digir cad oo waaweyn. Cunnada Asiya ayaa isticmaasha digirta cagaaran.
Waa maxay digirta waxtarka leh ee ragga iyo dumarka
First of dhan, digirta waa faa'iido leh sababta oo ah borotiinka waxaa lagu nuugo by jirka by ku dhowaad 80%: waxa si fudud u beddeli hilibka iyo kalluunka, iyada oo aan jirka jirka culus dufanka xayawaanka. Faa'iidooyinka digirta ee jidhka ayaa lagu muujiyey:
xoojinta difaaca jirka iyo sii kordhinta caabuqyada caabuqa;
xakamaynta dheef-shiid kiimikaadka;
saamaynta faa'iido leh ee nidaamka dareemayaasha;
ka qaybqaadashada dhiigga iyo sameynta unugyada dhiigga cas;
ka saarista ciidda iyo dhagaxyada laga sooco gallbladder iyo kelyaha;
Hagaajinta habka urojinimada;
la dagaallanka geeddi-socodka bararka ee beerka;
saameyn wanaagsan oo ku saabsan waxqabadka mareenka caloosha;
ka hortagga cudurrada ee godka afka, ka hortagga muuqaalka tartar.
Beeraha, kaabajka, karootada, marigolds, bocorka, strawberries, galley, yaanyo, baradhada ayaa ah kuwa ugu wanaagsan "deriska" ee digirta beerta, maadaama ay leeyihiin saameyn faa'iido leh oo midba midka kale u soo jiidan karo beedka si loo fiicnaado.
Iyada oo infekshannada mindhicirrada, cudurada qallalka, laabotooyinka, Digirta gaduudan ayaa lagula talinayaa, maadaama maadooyinka faa'iidada leh ay ka sarreeyaan kuwa noocyada kala duwan iyo noocyada digirta. Qadar badan oo antioxidants ah oo ilaaliya dhalinyarada oo keena xagjirnimo bilaash ah, oo ah maaddada sare ee birta iyo fitamiin B6, oo hagaajiya xaaladda jidhka iyo timaha - tani waa waxa loo isticmaalo digirta gaduudan ee dumarka.
Waa muhiim! Dhammaan noocyada digirta, gaar ahaan casaanka, waa kuwo aad u sun ah oo ku jira foomkooda cayriin. Ka hor intaan la isticmaalin, waa in la qooyay wakhti dheer (dhowr saacadood, si caadi ah looga tago habeenkii), ka dibna ku kari kuleylka kulaylka ugu yaraan laba saacadood. Kaliya waxaa la burburiyaa sunta kuleylka daaweynta kuleylka.
Macaamiishu sidoo kale waa ku raaxeeyaa noocyo digir cad ah. Isticmaalkooda waxaa sabab u ah kordhinta maaddada fiber, magnesium iyo folic acid. Gaar ahaan waxaa lagu muujiyey isticmaalka digirta cad ee loogu talagalay dadka qaba calool-istaagga.
Digirta cagaaran Gaar ahaan qadarinayaan nafaqada, marka lagu daro faa'iidooyinkeeda, kalooriye yaryar, ma ahan wax iska caabin ah iyo waxyeelo gaarsiisan jirka. Qanjirta cagaaran waxaa loogu talagalay dhirta cagaaran iyo kuwa digirta, inkastoo kuwani ay yihiin dhaqamo kala duwan. Beerta Asparag waxaa ku jira qadar badan oo borotiin ah, oo lagu karsado labada miraha iyo qaybaha dhaqankaan. Waxay ka saartaa dheecaanka xadiga dheeraadka ah iyo milixda jirka, waxay ka caawisaa nidaamka wadnaha iyo xididdada. Maaddaama ay ka kooban tahay arginineineed, waxay la mid tahay guryaha guryaha ku jira insulin, digirta asparagus waa badeeco heer sare ah oo loogu talagalay sonkorowga.
Digirta cagaaran waxay faa'iido u leedahay waxkasta oogada, ma laha wax iska caabin ah oo aan waxyeello u geysanin dumarka uurka leh. Dhaqanka ayaa hodan ku ah fiitamiinada quruxda badan A, C, E, taas oo si weyn u hagaajineysa xaaladda maqaarka, iyada oo siineysa dhalinyaro badan, muuqaal cusub. Hooyooyinka mustaqbalka ah ee digirta cagaaran waxay ka caawiyaan sidii ay ula qabsan lahaayeen walaac, dareen-celin xad-dhaaf ah iyo isbeddel niyadda ah. Dhammaan kuwa kale, digirta cagaaran waxay faa'iido u leeyihiin in ay hubiyaan habka nidaamka dheef-shiidka, si caadi ah loo nadiifiyo dheecaanka casiirka gaaska iyo hagaajinta shaqada beerka iyo kelyaha.
Digirta xayawaanku waxay leedahay faa'iido weyn oo ragga ah, ka ilaalinta adenoma ee qanjidhka kaadimareenka iyo bixinta jirka oo leh jajab lagama maarmaan ah.
Dadka doonaya in ay lumaan miisaankooda ama daawashada miisaankooda, kaliya nafaqada waxay ku talinayaan inay ku jiraan digirta cuntadaada. Marka lagu daro nuxurka caloric ee dhaqankaan, waxaa ku jira fiber, aad u faa'iido leh dheefshiidka. Thanks to fiber, digirta waxay bixisaa dareen ah fadhi waqti dheer, taas oo yareyneysa tirada cuntada. Intaas waxaa sii dheer, tani waxay xaqiijineysaa ka saarista sunta waxyeellada leh jirka, waxay ka hortagtaa muuqaalka burooyinka malignantiga ah waxayna caadiyan heerka sonkorta dhiigga.
Haddii aad isku deyeysid inaad miisaanka lumiso, waa inaad gasho cunto karbohaydhka caadiga ah, sida: kaabajka, qajaarka, yaanyada, dabacasaha, basbaaska, karabuurka iyo ari.
Sidee loo isticmaalaa digirta kondomoole
Faa'iidada digirta ayaa lagu muujiyey qiimaha nafaqada oo keliya. Dhaqanka waxaa si firfircoon loo isticmaalaa kiknoolajiyada. sida qayb ka mid ah alaabta daryeelka maqaarka kala duwan. Maskaxyada wejiga iyo qoorta oo ku saleysan digirta si fiican ayey u nuujisaa maqaarka, waxay leeyihiin saamayn iyo sarreyn. Intaa waxaa dheer, digirta ayaa leh hanti madow ah, taas oo u sahlaysa midabka iyo dusha maqaarka.
Muuqaaladani si nadiif ah ayey u nadiifiyaan, cuncunka cuncunka iyo cuncunka, waxay yareeyaan daal qarsoodi ah waxayna yareynayaan bacaha hoostooda. Maaskada ugu caansan iyo waxtarka leh ee ku habboon dhammaan noocyada maqaarka, waxaa loo diyaariyaa si aad u fudud: 2 tbsp. l jilicsan oo la jilciyey beedka lagu daray 1 tbsp. l saliid saytuun iyo ½ tbsp. l liin. Codso in la nadiifiyo maqaarka oo tago ilaa 20 daqiiqo, ka dibna raaci biyo diirran. Iyada oo ku xiran noocyada maqaarka, waxaad bedeli kartaa maaddooyinka oo aad abuuri kartaa farmashiyahaaga aad jeceshahay. Sidaa darteed, maqaarka qalalan waxaad ku dari kartaa kareemka iyo saliidaha kala duwan: Qolfaha shimbiraha, jeermiska qamadiga ah, yicibta, shaaha, qumbaha, iwm. Maqaarka ooli - saliida yaryar iyo nadiifinta nadiifinta: oatmeal ama burka.
Ma jirtaa wax faa'iido leh oo la isticmaalo digirta qasacadaysan?
Ilaalinta Beerka - Tani waa mid ka mid ah fursadaha ugu kalsoon ee lagu ilaalinayo badeecadan iyo hantida nafaqada ee qiimaha leh. Qiyaastii 70% fitamiinada iyo ilaa 80% ee macdanta ku jirta digirta ayaa lagu kaydiyaa qaabka qasacadaysan. Si kastaba ha ahaatee, digirta qasacadaysan waxay noqon kartaa oo keliya faa'iido leh haddii alaab-qeybiyeyaashu ay u hoggaansamaan xeerarka iyo ilaalinta xeerarka iimaanka wanaagsan. Tusaale ahaan, sida laga soo xigtay GOST, digirta leh qiyaaso kala duwan oo ah 0.6 illaa 1 cm waxay ku haboon tahay ilaalinta.Qodobka ugu wanaagsan ee ilaalinta digirta waa in uu ka koobnaado wax ka badan afar qaybood: biyaha, sonkorta, cusbada iyo digirta.
Kaliya acid acetic waa loo oggol yahay sida ilaaliye. Sidaa darteed, marka aad iibsaneyso dukaamada cuntada qasacadeysan, waxaad u baahan tahay inaad fiiro gaar ah u yeelato qaybta iyo soo saaraha si looga fogaado iibsashada badeecadaha tayada yar. Waxaa fiican inaad soo iibsato digirta weelka dhalada si aad u aragto tayada. Ka hor inta aanad isticmaalin, digirta qasacadaysan waa in si fiican loo dhaqo biyo qabow si aad u dhaqdo haraaga waxyaabaha haraaga ah.
Waa muhiim! Ha ku xad-gudbin digirta qasacadaysan dadka ay badanaa la kulmaan suuxdinta iyo cudurrada kale ee mareenka caloosha.
Yaa ka mid ah bean waa ka soo horjeeda
Waxaan dhihi karnaa faa'iidooyinka iyo waxyeelooyinka digirta ayaa kala soocaya khad khafiif ah - heerka diyaargarowga alaabta. Waa maxay sunta ay ku jirto qaabkeeda cayriinka ah ee aadka u faa'iido badan ee daaweynta qallajinta iyo kuleylka dheer. Sidaa darteed, qawaaniinta ugu muhiimsan, si ay digirta u keenaan faa'iido kaliya - cun si fiican u kariyo. Si kastaba ha ahaatee, waxaa jira xoogaa xadidan isticmaalka digirta la kariyey. Daryeelka waa in loo qaataa suxuunta digirta kuwa u nugul kuwa boogaha caloosha, cholecystitis, nephritis, pancreatitis, turqo iyo gastritis oo leh qandho sare.